Golden Glass Xiinka Muhiimka ah Oil Diffuser - Design fiican & Sameeyo Co., Ltd
Ku raaxayso aragnimada udugga kama dambaysta ah la theGolden Glass Xiinka Muhiimka ah Oil Diffuser. Powered by xadhig awood (waxaa ka mid ahaa), design iminka this il-qabad diffuser galaas ee ka dhigayaa fiican ee qolka kasta. Tani diffuser udugga ultrasonic ogolaan doonaa inaad si ay u damiyaan saliidaha aad ugu jeceshahay lagama maarmaanka ah ee miiska aad shaqada, Dhinaca sariirta ama meel kale oo yar yar oo kasta.
waayo-aragnimo udugga leh theGolden Glass Xiinka Muhiimka ah Oil Diffuser. Powered by xadhig awood (waxaa ka mid ahaa), design iminka this il-qabad diffuser galaas ee ka dhigayaa fiican ee qolka kasta. Tani diffuser udugga ultrasonic ogolaan doonaa inaad si ay u damiyaan saliidaha aad ugu jeceshahay lagama maarmaanka ah ee miiska aad shaqada, Dhinaca sariirta ama meel kale oo yar yar oo kasta.
Raaxo cawsduur diffuser handmade